Maaddaama maxkamadaynta dilkii Mr. George Floyd ay soo dhowdahay, waxaan marka hore sharaf u leenahay noloshiisa iyo khasaaraha aan laga soo kabsan karin ee qoyskiisa iyo kuwa ay jecel yihiin ay soo mareen.
Waxaan hadda si wada jir ah u soo saari karnaa caddaaladdaas - ugu yaraan kiiskan, xusuusta ninkan Madow, aabaha, walaalkii, iyo saaxiibkiis - ayaa adkaaday. Aynu qadarinno baaxadda xilligan oo aan ka shaqeyno maalin aan caddaaladdu ahayn wax aan caadi ahayn oo loogu talagalay dadka midabka leh.
Marka laga soo tago hal go'aan maxkamadeed, aan sidoo kale waqti qaadano si aan uga fikirno sida dhaqamada ku xidideysan, caadooyinka dhaqanka, iyo qaababka go'aan gaarista ay u waari karaan sinaan la'aanta dhammaan nidaamyadeena. Takoorka isirka waa dhaxal taariikhda soo jireenka ah ee umadeena, iyo cunsuriyada hay'adeed iyo eex la'aanta miyir la'aanta ayaa sii socota. Waan awoodnaa waana inaan ballanqaadnaa inaan si fiican u qabanno.
Waxaa la joogaa waqtigii aan himiladayada horay u sii wadi lahayn - si aan u odoroso oo aan isugu soo ururinno cadaalad, hal abuur, iyo mustaqbal aad u tiro badan oo dadka oo dhami ku noolaan karaan. Waa mustaqbal ay kujiraan awood wadaag, barwaaqo, iyo kaqeybgal. Waa mustaqbal ay qof walba — jinsiyad kasta iyo qowmiyad kasta, lambar kasta oo zip, xaalad kastoo dhaqan-dhaqaale ay ku neefsan karto hawo nadiif ah; ku shaqee shaqo tayo sare leh; hel guri ammaan ah oo la awoodi karo; si buuxda uga qaybgalno dimuqraadiyaddayada; kuna raaxeysato meera caafimaad qaba oo loo ilaaliyo jiilalka soo socda.
Waxaan ugu yeereynaa agaasimayaasha guud, hogaamiyaasha bulshada, iyo dhamaan dadka deegaanka in ay mideeyaan codadkooda si ay u dalbadaan, wax u wada abuuraan, oo u marshaliyaan mustaqbalkan sinaanta badan. Haddii Minnesota ay horumar ka samayn karto arrimahan - xilligan oo adduunka oo dhami daawanayo - waxaan noqon karnaa calanka qaada inta kale ee qaranka.
Waqtiga hadda waa, mustaqbalkana innagaa leh si aan u qaabeyno.
Anaga oo ogsoon qaska wadajirka ah ee sanadkii la soo dhaafay, xafiisyadeenna waa la xiri doonaa Abriil 21-22, 2021. Waqtigaani wuxuu noqon doonaa waqti nasasho iyo milicsiga oo naga caawin doona inaan la-hawlgalayaashayada kala shaqeyno tamar cusub. Waxaan rajeyneynaa inaad adiguba daryeeli kartid naftaada iyo ururkaagaba.